Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku baaqay in wax laga qabto fatahaada wabiga Shabeelle ee magaalada Jowhar | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku baaqay in wax laga qabto fatahaada wabiga Shabeelle ee magaalada Jowhar
“Waxaan halkan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed gudaha iyo dibbadaba inay u istaagaan oo ay gacan siiyaan dadka ay saameysay fatahaada wabiga.”ayuu yiri Ra’iisuL Wasaare Rooble.
Sidoo kale ra’iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay ka qeybqaataan sidi gacan looga geysan lahaa fatahaada wabiga Shabelle.
“Waxaan si rasmi ah aan codsi ugu jeedin doonaa Beesha Caalamka inay gacan ka geystaan sidii loo caawin lahaa dadka ay saameysay fatahaada wabiga Shabelle ee ku sugan magaalada Jowhar.”ayuu yiri ra’iisul Wasaare Rooble.
Booqasho saacado qaatay oo uu kutegey Ra’iisul Wasaare Rooble magaalad Jowhar ayuu ku tegey kanaalka Kalundi oo 2km dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Jowhar halkaas oo uu ku soo arkay biyaha wabiga Shabelle ka soo fatahay oo jaray wadada laamiga ah ee isku xirta magaalada Jowhar iyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku baaqay in wax laga qabto fatahaada wabiga Shabeelle ee magaalada Jowhar was last modified: June 3rd, 2021 by Admin
Ruushka oo sheegay in la dhameystiray heshiiska dib u soo nooleynta Nukliyeerka Iiran